TORITENY Alahady 11 Novambra 2017 | FJKM Amboniloha
“Miandry ny Tompo ny vavolombelona mino”
Mika 7 : 7 – 10 /
Raha misy ny zava –miseho amin’ny fiainana dia mila manontany an’Andrimanitra tsara ny anton ‘izany ?
Na ho famaizana na ho fitaizana nefa , Andriamanitra dia eo foana fa tsy mandao na mahafoy ny olony. Ary manolotra nanao ny toe –panahy tokony hananana ny Tompo ho anao amin’ny alalan’izao andalan-tsoratra Masina izao eo am-piandrasana ny famonjeny. Mika 7 : 7 – 10
I- Mandiniha tena ary ekeo ny fahadisoanao
Toko 6 : 8 “Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain’i Jehovah aminao, Dia izao ihany: Ny hanao ny marina sy ny ho tia famindrampo ,ary ny hanaraka an’Andriamanitrao amin’ny fanetren-tena.” Diniho ny fiainanao teo anivon’ny fiaraha –monina, tena miaina amin’ny fahamarinana, famindram-po sy fanetren-tena ve, raha tsy izany dia efa nampahatezitra an’Andrimanitra ianao, koa ekeo ny fahadisoana (confession) amin’izay endrim-pahotana ary miverena amin’Andriamanitra tanteraka. Mika 7 : 9
II- Mahareta amin’ny fitondran’Andriamanitra
Ny olana lava reny miseho amin’ny fiainana dia tokony hampandinin-tena ny olona ohatra : tsy fahasalamana , fahantrana , fahafatesana sns…. Mety manafay anao Andrimanitra ka asehony amin’ny alalan’ny zava-tsarotra mifanesy toy ireny , ny tanjona dia ny hiverenanao Aminy nefa mila maharitra ianao amin’ny fitondrany , nefa raha miverina ianao dia famonjena no fiafaran’izany cf and 7 “Fa izaho kosa dia hanandrandra an’i Jehovah, Eny, hiandry an’Andriamanitry ny famonjena ahy aho; Andriamanitro no hihaino ahy.”
III- Matokia Azy
Na toy inona na toy inona karazam-pahotana vitanao ka nahatonga ny olana lava reny sy saro-bahana eo amin’ny fiainanao ,nampahatezitra an’Andrimanitra ianao saingy tsarovy fa Izy Andriamanitra dia eo foana , miandry ny fiverenanao , ary matokia fa raha miverina ianao dia ho raisiny indray. Toy ireny olona mandeha amin’ny tunnel ireny , tsy maintsy hahita ny mazava amin’ny farany . Cf and 9 : Ny fahatezeran’i Jehovah dia hiaretako ihany fa efa nanota taminy aho ambara-pandahany ny teniko ny hanomezany rariny ho ahy; hamoaka ahy ho amin’ny mazava Izy, ka ho faly aho mahita ny fahamarinany.”
Indray mipi-maso ny fahatezeran’Andriamanitra noho ny ditranao , “Aza mifaly ahy, ry fahavaloko, fa na dia lavo aza aho, mbola hiarina ihany; raha mitoetra ao amin’ny maizina aho, dia Jehovah no fahazavana ho ahy. dia hahita izany ilay fahavaloko ka hosaronan-kenatra, fa mandrakizay kosa ny famindrampony raha manaiky sy mankato ianao.”Dia ilay nanao tamiko hoe: Aiza Izay Jehovah Andriamanitrao? Ho faly mahita azy ny masoko; Ankehitriny dia ho fanitsakitsaka toy ny fotaka eny an-dàlambe izy.
Catégories :	Soratra Masina, Toriteny	/ par AnjGab 24 novembre 2017